Hello Nepal News » उत्साहभन्दा चिन्ता बढी : ग्रानाडासँगको कमब्याक जितपछि कोम्यानले के भने ?
उत्साहभन्दा चिन्ता बढी : ग्रानाडासँगको कमब्याक जितपछि कोम्यानले के भने ?
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाका प्रमुख प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले कोपा डेल रे कपको सेमिफाइनल प्रवेश गरे पनि आफूहरू उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । गत राति बार्सिलोनाले ला लिगा टोली ग्रानाडामाथि ०–२ ले पछि परेको अवस्था उल्टाएर ३–५ को जित निकाल्दै सेमिफाइनल पुगेको छ । हार नजिक पुगेको बार्सिलोनाले नाटकीय रूपमा कमब्याक जित निकालेको थियो ।
बार्सिलोनाले खेलको अन्तिम ५ मिनेटमा २ गोल गरेर खेल २–२ को बराबरी बनायो भने त्यसपछि ३० मिनेटको समयमा थप ३ गोल गरेर खेल ३–५ ले जित्यो । बार्सिलोनालाई कमब्याक जिताउन एन्टोनी ग्रीजम्यान, जोर्डी अल्बा र फ्रेन्की डे जोङले प्रमुख योगदान दिएका थिए । हार्दै गरेको खेल जितेर सेमिफाइनल पुगेपछि कोम्यानले खेलपछि मिश्रित भनाइ राखे ।
कोम्यानले ग्रानाडासँगको खेल समग्रमा औसत मात्रै रहेको बताउँदै उनले उत्साहित हुन आवश्यक नरहेको बताए । खेलमा फर्किन २ गोल गर्नुअघिसम्म बार्सिलोनाको खेल निकै खराब रहेको उनले बताए । ‘हामीले पुनरागमन गरेर खेल जित्दै अर्को चरण पुग्यौं । तर, यो जितबाट हामी उत्साहित हुनु आवश्यक छैन । बरु चिन्ता लिनुपर्छ,’ कोम्यानले भने, किनभने, खेलमा फर्किन २ गोल गर्नुअघिसम्म बार्सिलोनाले निकै खराब खेलेको थियो । जब हामी ९० मिनेटको खेलमा ८७मिनेटसम्म खराब खेल्छौं भने यो खुसी हुनुपर्ने कुरा होइन, बरु चिन्ता गर्नुपर्छ । हामीले खेल त जित्यौं तर हामी अझै पनि सही दिशामा छैनौं ।’
कोम्यानले ग्रानाडाविरुद्धको कमब्याक जित दबाबपूर्ण अवस्थाको राम्रो नतिजा रहेको बताए । ‘ग्रानाडाविरुद्धको कमब्याक जित कठिन अवस्थाको उत्कृष्ट नतिजा थियो । जब बार्सिलोनाले पहिलो गोल गर्यो, त्यहाँबाट आफ्नो स्तरमा देखियो । र, हामीले ५ गोल हान्यौं । खासमा हामीले सुरआतबाटै यस्तै खेल्न सक्नुपर्थ्यो । आज यस्तो भयो भन्दैमा सधैं सबै खेलमा यस्तै हुँदैन । हामीले अझै धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्छ र संयमित भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति २२ माघ २०७७, बिहीबार ०६:५८